‘काममा खुसी भए, जीवन सुखी बन्छ’ | सुदुरपश्चिम खबर
डा. नबल पजियारलाई धेरैले मेमोरी किङका रूपमा चिन्छन्। हालै गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डस्मा नाम दर्ता गराएर उनले उक्त परिचयलाई प्रमाणित नै गरिदिए।
बिहान बेलुकाको गाँस कटाएर खाडीका श्रमिकले पठाए सिलिन्डर !!
गत डिसेम्बर १९ मा भारतको हैदराबादमा भएको समारोहमा उनले गिनिजका निर्णायकसामु एक मिनेटमा ५४ वस्तुको नाम सम्झेर अघिल्ला कीर्तिमानलाई तोडिदिए। एक मिनेटमा ५२ वटा वस्तु स्मरण गरेर अन्तिम रेकर्ड बनाएका एक भारतीयको रेकर्ड तोडेर विश्व कीर्तिमानी नेपाली बन्न सफल भएका पजियारसँग अन्नपूर्णकर्मी रामकला खड्काले गरेको कुराकानी ः
उदाहरणका लागि एउटा कोठामा भएका सामानमध्ये सोफा, मोबाइल, कुर्सी, क्यालेन्डर आदिलाई छुट्टाछुट्टै शब्दमा भन्दा चित्रमा उतारेर एक वस्तुलाई अर्कोसँग जोडेर हेर्दा छिटो र लामो समयसम्म सम्झन सकिन्छ। विद्यार्थीलाई लामा अनुच्छेद सम्झन गाह्रो पर्छ। तर, त्यसका मुख्य शब्दहरूको सूची बनाएर एकापसमा जोडेर सम्झँदा बीचको भाषा आफैं मिलाएर लेख्ने सकिन्छ। स्मरण शक्ति बढाउन सही आहारविहार र आचरण उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो दिमागलाई धूमपान र मद्यपानले पनि असर पु¥याउने हुँदा यिनलाई त्यागे स्मरण शक्ति बढ्छ।
कुनै पनि कुरालाई सम्झने सही तरिका बालबालिकालाई पनि कसैले सिकाएका हुँदैनन्। यही कारणले गर्दा उनीहरूमा बिर्सने समस्या बढ्दो छ। लकडाउनयता उनीहरूले अत्यधिक प्रयोग गरेका ग्याजेटले पनि स्मरण क्षमतामा असर पु¥याएको देखिन्छ। मोबाइलको रेडिएसनले बालबालिकाको दिमागका कोषिकाहरूलाई असर पु¥याउँछ। फोनमा बढी कुरा गरेको दिन टाउको दुख्न थालेको महसुस गरेकै हौंला। विगतमा लामो समय भएको अनलाइन कक्षाले पनि बालबालिकामा ग्याजेटको झन् लत बसेको छ। बच्चाकै लागि पनि कतिपयले मोबाइल किने। तर, शारीरिक कक्षाभन्दा अनलाइन कक्षा त्यति प्रभावकारी पनि देखिएन।
ग्याजेट आफैंमा गलत होइन। कुन तरिकाले प्रयोग गरिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसैले यस्ता उपकरण हेर्ने निश्चित समय तोकिदिँदा यसले पु¥याउने नकारात्मक प्रभावबाट छोराछोरीलाई जोगाउन सकिएला। बच्चाले पनि अभिभावकसँग के चाहन्छ भन्ने कुरा बुझाउँदा बल्ल तालमा ताल मिल्छ। यसका लागि ‘सक्सेसफुल प्यारेन्टिङ’को छुट्टै तालिम सञ्चालन गर्ने गरेका छौं।
हिजोआज तनाव फेसनजस्तै भइसक्यो। सफलता पाउन तनावबाट गुज्रनैपर्छ भन्ने सोचाइ बढेको छ। तर व्यायाम, योगा, प्राणायाम आदिले तनाव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। हिजोआज मानिस आफ्नो दुःखले भन्दा अरूको सुखले बढी दुःखी भइरहेका छन्। आफूले गरेको काममा सन्तुष्टि महसुस गर्दैनन्। अरूको कामलाई मात्रै ‘आहा’ ठान्छन्। त्यसैले कामलाई माया गर्दा खुसी हुन सकिन्छ। तपाईं त्यही गर्नुस् जुन कामलाई माया गर्नुहुन्छ वा त्यही कामलाई माया गर्नुस् जुन तपाईंले गरिरहनुभएको छ। आफूले गरिरहेको काममा उत्कृष्ट प्रदर्शन दिन सके जीवनमा खुसी भइन्छ।
जुनसुकै देशका मानिसको पनि ‘साइकोलोजी’ प्रायः उस्तै हुन्छ। त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने तरिका र भाषा मात्र फरक हो। सबै ठाउँमा तालिम दिँदा समस्या त्यति ठूलो देखिनँ जति मानिसले आफ्नो सोचमा बनाएको हुन्छ। जीवनमा आइपर्ने समस्यालाई एक चुनौती र अवसरका रूपमा लिएर आफूलाई उन्नति गराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। अरूसँग आफ्नो जीवन तुलना गर्दा जीवन झन् दुःखी हुन्छ। त्यसैले आफूले जे पाएको छ त्यसका लागि भगवान्लाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो कर्मक्षेत्रमा डटिरहे सफलता पाउन सकिन्छ।
बलिउड कलाकारको निकै कडा प्रोटोकल हुन्छ। उनीहरूका सामु जानु भनेको ब्रह्माको अगाडि गएसरह हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको केही ‘पोजिटिभ भाइब्स’ लिन पाऊँ भनेर फोटो खिचाउँछु। सफल मानिसलाई छोएको हावाले हामीलाई छुँदा त्यो सफलता हामीमा पनि सर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। (annapurnapost बाट सभार)
कोरोना बढेपछि भारतबाट फर्किंदै नेपाली !!
शिवनाथ धाम जाने सिंढी सहितको पदमार्ग निर्माण !!